Ireo toetra sy fitondran-tena tadiavin'ny CMO | Martech Zone
Ny fananana masoivoho iray dia sady mahafa-po no sarotra. Ny fototry ny zava-bitantsika rehetra ho an'ny mpanjifantsika dia mbola tianay ny manampy ny mpanjifa handroso ny maodely fahamatorana ara-barotra. Izy io dia ahafahantsika miasa miaraka amin'ny fanombohana sy ny mpanjifa orinasa, mampitombo ny fahafantarana azy ireo sy ny fidiram-bolany an-tserasera.
Ny tsy fantatro dia ny fiovana tokony hataonay, amin'ny maha maso ivoho antsika, hijanonana eo alohan'ireo fiolahana ary hijanonana ho mpifaninana amin'ny orinasanay. Tsy ny fiovan'ny fitondran-tena mividy, ny fironana amin'ny famoronana, na ny fanovana ara-teknolojia ihany. Ny fiheveran'ny orinasa ny masoivoho sy ny fomba nanompoan'izy ireo azy dia mitohy miova. Raha niverina androany ny mpanjifanay taloha, taona vitsivitsy lasa izay, dia hahita fizotran'ny varotra vaovao sy fitaovana fampitaovana ary loharano.
Ireo masoivoho dia manohy manana tombony mihoatra ny fandraisana satria afaka mandanjalanja ny vidin'ny fahaizana sy ny fitaovana amin'ny mpanjifany rehetra. Ny consultant na masoivoho fotsiny dia mila manafika ny olana fa tsy ny olana hafa rehetra manodidina ny orinasan'ny mpanjifa. Hitan'ny orinasa fa ny fiaraha-miasa amin'ireo masoivoho dia ho tamberim-bola bebe kokoa noho ny fikasana hanakarama ny manam-pahaizana rehetra ao anatiny.
Ny fanadihadiana nataonay momba ny CMO mihoatra ny 70 sy ny resadresaka 1: 1 niaraka tamin'ny mpitarika marika avy amin'ny The CMO Club dia naneho izay tena tadiavin'ny mpivarotra amin'ny fiaraha-miasa ataon'izy ireo. MediaMath, Fivoarana ny maodelim-piaraha-miombon'antoka amin'ny asa aman-draharahanao hitarika fahombiazana amin'ny programa.
Ny CMO dia manome lanja indrindra an'ireo masoivoho
Aiza amin'ireo faritra ireo no nisy ny fahafahanao misafidy tena manampy amin'ny fanabeazana ny marikao?
Best Practices - Hevitra sy fanatsarana ny mpihaino
Data - Fananana sy fananana
mpiara-miasa - Mitondra ireo mpiara-miasa tsara indrindra amin'ny latabatra
Laharana araka ny lanjan'ny zava-dehibe izay tsara fanampiana ny maso ivoho toa anao:
Transparency - Fifandraisana mifototra amin'ny mangarahara tanteraka
fampifanarahana - eo anelanelan'ny tanjon'ny fampielezan-kevitra sy ny tanjon'ny orinasa
Hevitra - Fifandraisana manosika sy misintona izay mamela hevitra vaovao, hevitra mahasoa, ary resaka malalaka
Safidin'ny mpivarotra - Fiaraha-miasa hitady sy hampiasa ny teknolojia fanaovana doka sy varotra tsara indrindra mifototra amin'ny filako
Management - amin'ireo sehatra teknolojia sy fiaraha-miasa rehetra
Discovery - Mampahafantatra ireo sehatra teknolojia tsara indrindra amin'ny latabatra ho an'ny paikady iraisana sy / na fanatanterahana
Mazava ho azy, tsara ny mitarika ny fonosana amin'ny toetra mampiavaka azy fifandraisana! Mandany fotoana be, na tsy mihoatra aza, ny fifampiresahana amin'ireo mpanjifantsika ankehitriny noho ny fampiharana sy fampiharana ny paikady tena izy.
Ny tatitra feno dia mifantoka ary misy ny fiantraikan'ny marketing amin'ny programa. Ity misy infographic topy topy:
Ampidino ny tatitra maimaim-poana
Tags: fahafahana misafidymangarahara amin'ny maso ivohofampifanarahanatsara indrindratanjona ara-barotratanjon'ny fampielezan-kevitracmocmo clubfanadihadiana cmoDatafampifanarahana tanjonahevitratanjona marketingteknolojia marketingMartechMediaMathmpiara-miasafahitana teknolojiafitantanana teknolojiafifidianan'ny mpivarotra
Torohevitra 3 hanazavana ny fisavoritahana amin'ny marketing amin'ny millennial
Ny New ABC an'ny antsinjarany: Mifandraisa foana